Diprospan - အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Anti-inflammatory အေးဂျင့်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောရောဂါများကုသရန်အသုံးပြုသည်။ အများစုကတော့ထိုးအတွက် Diprospan တာဝန်ပေးအပ်။ တစ်ဦးဆေးညွှန်းမပါဘဲတစ်ဦးဆေးဆိုင်များတွင်ဆေးထိုး၏ဝယ်ယူပေမယ့်တစ်ယောက်တည်း tool ကို stabbing အကြံပြုသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။
diprospanom အတွက်အဓိကတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း - betamethasone ။ ပြင်ဆင်မှုအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုလျင်မြန်စွာဒီဆေးဝါးအလွန်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင့်သွေးဆဲလ်ကစုပ်ယူနေကြသည်။ လူနာများ၏သက်ရှိနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. diprospana လျှောက်ထား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထိုးပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လေးပုံတစ်ပုံနာရီထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မည်။
ထိုး Diprospan ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပြင်, သူတို့ကလည်း, မနှစ်မြို့ဖွယ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုသက်သာရာကိုပင်အများဆုံးပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကိုသက်သာရာနှင့်လူနာထိတ်လန့်ပြည်နယ်ကနေဆုတ်ခွာကိုကူညီပေးပါတယ်။
အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦးကကျယ်ပြန့်အများအပြားရောဂါများကုသမှုများအတွက် Diprospan ဘို့ခွင့်ပြု:
အများစုကတော့ Diprospan ဆေးထိုးသည့် musculoskeletal စနစ်၏ရောဂါများအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်။ အဆိုပါ medicament ကောင်းစွာအဆစ်, arthrosis, osteoarthritis ၏ကုသမှုအတွက်သက်သေပြနေသည်။
ထိုး Diprospan လျင်မြန်စွာသက်သာရာ ဓာတ်မတည် ။ ထိုးဆေးရောင်ရမ်းခြင်းသက်သာရာနှင့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ Diprospan ဆေးဝါးအဆုံးသတ်ရေး, အစားအစာကနေဓာတ်မတည်မဆိုပုံစံများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာဆေးပညာ - ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်မှုများ၏ဖိနှိပ်မှုအတွက်နံပါတ်တစ်ဆိုလိုသည်။ Diprospan ချက်ချင်းဖောလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အသက်ရှူပုံမှန်။
ထိုးဆေးအရေပြားပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးဘို့ညွှန်ပြနေကြသည်။ ထိုး Diprospan psoriasis, lichen, ဝက်ခြံ, အရေပြားရောင်ရမ်း, နှင်းခူ, neurodermatitis, အင်ပျဉ်နှင့်များစွာသောအခြားရောဂါများကုသခံရ။
အလွန်မကြာခဏဆရာဝန်များသည်အသွေးရောဂါများကုသမှုများအတွက် Diprospan သတ်မှတ်: lymphoma, သွေးကင်ဆာနှင့်အခြားသူများ။
Diprospan ဆေးထိုး - အတွက်မရှိမဖြစ် tool ကို anaphylactic ထိတ်လန့် ။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုမှုအတွက်အားလုံးရိပ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ Diprospan လည်းအသည်းရောင်အသားဝါဘီ, colitis, sinusitis, အသည်းပျက်ကွက်အတွက်တာဝန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုမှု diprospana ၏နည်းလမ်းများ - ဒူးသို့ထိုး, ဖနောင့်, နှာခေါင်း
ကုသမှုသောက်သုံးသောနှင့်ကြာချိန်အထူးကုကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူများကိုတော်တော်များများပတ်ကြာမြင့်သောရောဂါအပြည့်အဝကုသမှုလိုအပ်နေချိန်မှာ, အချို့ပြဿနာတွေအလုံအလောက်တစ်ခုတည်းဆေးထိုးဖြေရှင်းရန်။
Diprospan များသောအားဖြင့် intramuscularly အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကပိုပြီးထိရောက်တိုက်ရိုက်ရောင်ရမ်းအာရုံသို့ထားတဲ့ဆေးထိုးခြင်းထက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, အလွန်မကြာခဏ Diprospan ထိုးအဆစ်ထဲသို့ထားကြပါတယ်:
Diprospan ၏အကူအညီဖြင့်ဖနောင့်စပါးကုသ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မူးယစ်ဆေးဖနောငျ့သို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်း။ သင်တန်း၏, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအများဆုံးသာယာသော, ဒါပေမယ့်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မတူဘဲတစ်သျှူး necrosis သို့မဟုတ်ကျုံ့နှိုးဆော်ခြင်းမဟုတ် Diprospan ။
အချို့ကိစ္စများတွင် (မတည့် rhinitis အတွက်ဥပမာ) ထိုးဆေး diprospana နှာခေါင်းတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ သေးငယ်တဲ့ဆေးများမှာမူးယစ်ဆေးတစ်ခုချင်းစီကိုနှာခေါငျးနှင့်နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်အရေပြားအတွက်အုပ်ချုပ်သည်။
အုပ်ချုပ်သည့်အခါ intramuscularly အများဆုံးမူးယစ်ဆေးထိုးနှစ်ခု milliliters ထက်မပိုပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာတိုက်ရိုက်ထင်းမီးရောဂါအတွက်ဆေးထိုးအိုင်အိုဒင်းဆေးထိုးမှုနှုန်းတဦးတည်း milliliter လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
ထိုးနာကျင်မှု့မရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်းစားပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆေးထိုးပြီးနောက် Diprospan နေဆဲနာကျင်မှုရှိနေကြသည်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ Diprospan ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့အချို့ကိစ္စ၌, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်နှင့်အပြီးအီကိုရှောင်ကြဉ်ရန်။
Monocytes - မိန်းမတို့အဘို့စနစ်တစ်ခု
VVD - အားလုံးသိကြသည်မဟုတ်ထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ရောဂါလက္ခဏာတွေ,
အဆိုပါတံတောင်ဆစ်၏ Bursitis - ကုသမှု
Meksidol - ထိုးဆေး
Amoebiasis - လက္ခဏာများ
သင့်ရဲ့ image ကိုဖန်တီးပေးမထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
တံခါး - မှတ်ပုံတင်ရေး
Daniel Craig ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကစားရန်သဘောတူညီခဲ့ခဲ့တာလဲ
တက်တူးထိုး Tina Kandelaki
Charlotte စာရွက် - ကျော်ကြားသောပိုင်ချက်ပြုတ်စိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ကူးများ
Clindamycin - Tablet များ
Sandra Bullock နဲ့ Bryan Randall ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်တစ်ဝှမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု